Killashee Hotel dia tsy misy afa-tsy 30km miala ny tanànan'i Dublin ary 2km fotsiny ivelan'ny tanànan'i Naas. Napetraka eo afovoan'ireo faritra midadasika any County Kildare, Killashee dia toerana manokana ary tsy afaka miandry izahay hizara izany aminao sy ny fianakavianao. Manomboka amin'ny halehiben'ny Victoria trano an-trano, hatrany amin'ny zaridaina kanto sy ala ala sy lalana be dia be dia be, misy toerana miafina azo zahana. Toerana tena mahaliana, miaraka amin'ny tantara manankarena mahafinaritra, miandry fotsiny ny hahitana azy.
Manomboka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ny efitrano fandraisam-bahiny miisa 141 izay notendrena tsara tarehy ka hatramin'ny serivisy manetriketrika natolotry ny Leisure Club miaraka amin'ny dobo filomanosana 25 m, sauna, efitrano fandroana, Jacuzzi ary gymnasium feno fitaovana ary koa ny Killashee Spa tsara tarehy misy efitrano fitsaboana 18 mahafinaritra. be ny manala aina anao ary mila miaina zavatra betsaka. Toeram-pitoniana, Killashee Spa no fialan-tsasatra farany ary tanjon'ny Killashee Spa hitondra anao amin'ny dia fahasalamana ho an'ny vatana, saina ary fanahy.
Misy trano fisakafoanana roa ao amin'ilay hotely. The Terrace Restaurant dia manolotra traikefa fisakafoanana mahatalanjona mitazana ireo zaridaina loharano ary misokatra isan'andro manompo dite sy sakafo hariva. Ny Bistro & Bar dia manolotra traikefa fisakafoanana mahazatra kokoa ho an'ny sakafo hariva sy koktail. Ny conservatory dia fonenan'ny Killashee Coffee Dock ho an'ny dite / kafe, scones, pastry ary manaikitra maivana anao. Ankafizo ny kafe fakana aina ary mitsabo fa hitety ny tranonao.
Betsaka ny hetsika ao amin'ny trano kanton'i Killashee ao anatin'izany ny làlana mandeha an-ala. Ny Maps Maps dia misy amin'ny fandraisana na maninona raha mindrana iray amin'ny bisikiletanay izay maimaimpoana ho an'ny vahiny rehetra. Mandehandeha mitsangatsangana mamakivaky ireo Fountain Gardens mahafinaritra, Lalaon'ny Lalaon'i Emma miaraka amin'i DEBRA Irlandy, ny Teddy Bear Picnic Garden na ilay ala Fairy Forest and Playground vaovao anay. Killashee dia manana ny lalan'i Johnny Magory - Bibidia sy lozisialy Irlandey ho an'ny ankizy. Miaraka amin'ny hetsika 4 ao amin'ny tranokala mifandraika amin'i Johnny Magory ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia manome toky anao fa misy fitsidihan'ny fianakaviana majika any Killashee.
Hotels, Luxury, Mpinamana, Spa Hotel, Swimming Pools, Toerana fampakaram-bady, Naas
Lalana Kilcullen, Naas, County Kildare, W91 DC98, Irlandy.